Abasemagunyeni: Eyona nto ilahlekileyo yeQhinga loBuninzi boMxholo | Martech Zone
Igunya: Eyona nto ilahlekileyo yeQhinga lamaQhinga omxholo
NgoMvulo, Aprili 4, 2016 NgoLwesibini, Aprili 5, 2016 Douglas Karr
Akukho veki iqhubeka Martech Zone Asikhathali kwaye sabelana nabanye ngeenyaniso, izimvo, iikowuti, kunye nomxholo wabo ngendlela ye-infographics nolunye upapasho.
Asiyiyo indawo yokujonga umxholo womnye umntu, nangona kunjalo. Ukwabelana nabanye ngezimvo zabantu akukwenzi ube ligunya, kuyayiqonda kwaye kuyomeleza igunya lombhali. Kodwa… ukuphucula, ukugqabaza, ukugxeka, ukubonisa nokuchaza ngcono umxholo wabanye abantu awugcini nje ngokuqonda kwaye womeleza igunya labo… ikwanyusa neyakho.
Xa ndifumana umxholo okwi-intanethi oxabisekileyo kubaphulaphuli bethu, ndithatha ixesha lokuwuhlalutya ngononophelo kwaye ndinike iinkcukacha endaziyo ukuba ziya kujongwa ngabaphulaphuli bam. Akwanelanga, umzekelo, ukupapasha i-infographic eyilwe ngomnye umntu. Ndidinga ukwaba loo infographic kwaye ndinike uhlalutyo olucacileyo lwayo olwahlukileyo kunye nezikhundla my ubuchule
Ingcaciso: Umgangatho wokuzithemba womntu owazi okuninzi ngento ethile okanye ohlonitshwayo okanye othobelwayo ngabanye abantu.
Ngokwenkcazo, kukho izinto ezintathu ezifunekayo kwigunya:
U bungcali -Umntu owazi kakhulu kwaye uyabhengeza zabo ulwazi.
ukuzithemba -Umntu okholelwa kuye zabo ulwazi xa besabelana ngalo.
Ukuqwalaselwa -Izinye iingcali ziqaphela ubuchwephesha obubonakaliswa ngokuzithemba ngumntu.
Ukuphinda uhlaziye ezinye izimvo zabanye abantu akunakuze kukwenze ube ligunya. Ngelixa kunokubonisa ukuba unobungcali, ayiboneleli nakuphi na ukuqonda ngokuzithemba kwakho. Kananjalo ayizukuphumela ekubeni waziwe ngoontanga bakho.
Igunya libalulekile kuhambo lwabathengi kuba abathengi kunye namashishini afuna ubuchwephesha ukubanceda nokubazisa ngesigqibo sabo sokuthenga. Ukubeka nje, ukuba ucaphula omnye umntu, umthengi uya kujonga imvelaphi yoqobo njengegunya elaziwayo- hayi wena.
Ukuba ufuna ukwamkelwa njengegunya, yiba ligunya. Awuyi kuyenza loo nto ngokuma emva kwezimvo zabanye abantu. Veza izimvo zakho ezizodwa. Vavanya uxhase izimvo zakho ngophando kunye namaxwebhu. Emva koko yabelana ngezimvo kwiindawo zeshishini ezikuvumela ukuba uthathe inxaxheba. Umvakalisi ngamnye uhlala efuna umbono owahlukileyo- yinto elula.
Isiphumo sokwabelana ngobungcali bakho kukuba ngoku ulingana noontanga bakho abaphambili kwishishini lakho, ungajongwa njengokuba umi emva kwabo. Njengoko usakha ukwamkelwa kwaye ngokuzithemba wabelana ngobuchule bakho, uya kufumanisa ukuba uyakuthenjwa kwaye uphathwe ngokwahlukileyo. Oontanga bakho baya kukuqonda kwaye babelane ngegalelo olibonelelayo.
Kwaye xa ubonwa njengegunya, ukuphembelela isigqibo sokuthenga kuba lula kakhulu.
tags: Igunyantembelouhambo lwabathengiinkcazo yegunyaubuchuleoontangaukuqonda
Ithetha Ntoni Ngokwenene “Intengiso Yemeko”?